Anna Kinberg oo lagu wado guddoomiyaha Moderaterna - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 9 december 2014 kl 11.00
Moderaterna oo soo jeediyay in Anna Kinberg guddoomiye loo doorto. Photo:Yvonne Åsell/SvD/TT
Maanta marka ay saacaddu gaadho 12:30, waxa uu xisbiga Moderaterna soo badhigi doonaa diyaargarowga uu ugu jiro doorashada hoggaanka cusub ee uu xisbigu yeelan doono. Waxaana loo badinayaa in Anna Kinberg Batra ay noqon doonto hoggaamiyaha cusub ee xisbiga, iyada oo beddeli doonta hoggaamihii hore ee xisbiga Fredrik Reinfeldt.
Anna Kinberg Batra waa horjoogaha xildhibaanada xisbiga u fadhiya baarlamaanka. Waxaanay sidoo kale taageero badan ka haysataa laamaha uu xisbigu ku leeyahay degmooyinka dalka. Doorashadan uu xisbiga Moderaterna ku dooran doono hoggaamiyahooda cusub waxa ay dhici doontaa 10 bisha janaayo sannadka 2015.
Taariikh nololeedka Anna Kinberg Batra:
Waxa ay sannadkii 1970 ku dhalatay xaafadda Skärholmen ee magaalada Stockholm. Waxaanay ku barbaartay deegaanada Djursholm, Nacka iyo waliba waddanka Holand. Waxa qaba majaajilaystaha David Batra, waxaanay dhashay gabadh yar. Anna Kinberg Batra waxa ay sannadkii 1983 ku biirtay garabka dhallinyarada ee xisbiga Moderaterna, iyada oo sannadkii 1996 garabkaasi ka noqotay guddoomiye. Sannadkii 2000 ayay ku biirtay baarlamaanka Iswiidhan. Iyada oo intii aanay baarlamaanka galin ahayd qof waddanka oo dhan ka caan ah.
Anna Kinberg Batra waxa ay baarlamaanka Iswiidhan ku jirtay tan iyo sannadkii 2006, iyada oo sidoo kale xildhibaan ahayd sannadadii 2001-2002. Intii ay baarlamaanka ku jirtay waxa ay ka mid noqotay guddiyada ay ka mid ka yihiin, guddida cashuuraha, guddida manaafacaadka, guddida maaliyadda iyo guddida midowga Yurub. Waxaanay sidoo kale ka mid noqotay guddida wasaaradda arrimaha dibadda iyo guddida baarlamaanka. Sannadadii 2007-2010 waxa ay ku jirtay guddida midowga Yurub, iyada oo sidoo kale 2010-2014 ku jirtay guddida maaliyadda. Tan iyo sannadkii 2010 waxa ay ahayd horjoogaha xildhibaanada uu xisbigu ku leeyahay baarlamaanka, waxaanay sidoo kale ahayd afhayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga. Anna Kinberg Batra waxa ay ka soo shaqayn maamulka deegaanka iyo ka degmadaba.
Waxa ay luuqadaha faransiiska iyo luuqadda Holanba ku baratay jaamacadda Stockholm. Waxaanay cilmiga dhaqaalaha ka baratay jaamacadda Handelshögskolan.
Intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2006 waxa ay lataliye dhinaca isgaadhsiinta iyo macluumaadka ah ka noqotay shirkad gaar ah oo ay samaysatay.
Xigasho: SVT, DN, Nationalencyklopedin, Fakta om folkvalda ( TT ), Ekot